किन बच्चाले टाउको दुखाइ छ?
कम से कम एक पटक मेरो आमाले आफ्नो बच्चाको शंकाको बारेमा एक टाउको दुखाइको सामना गर्यो। प्रायः, बच्चाहरूले 4-5 वर्ष पछि तिनीहरूलाई चिन्ता गर्ने लक्षणहरू वर्णन गर्न सक्छन्। यद्यपि, टाउको कहिलेकाहीँ सानो छोटो बच्चा पनि दुख्छ, जुन लामो समयसम्म कुकुरले बताउन सक्दैन।
यदि बच्चाले अनुहारमा पीडाको शिकायत दुर्लभ हो भने, मेरी आमाले प्राय: उनलाई गोलीमा लिन निम्तो दिन्छन्। त्यसोभए, कहिलेकाहीँ आमाबाबुले प्रश्नको बारेमा चिन्ता गर्दछन् कि किन बच्चा लगातार सिरदर्द हुन्छ, र मेडिकल सल्लाह खोज्न बाध्य हुन्छ।
बालबालिकाको टाउको दुख्ने मुख्य कारणहरु
बच्चाहरु मा सबै भन्दा साधारण सिरदर्द निम्न कारणले गर्दा हो:
विभिन्न वायरल रोगहरू बच्चाको समग्र परिस्थितिमा नराम्रो असर हुन सक्छ, तर यो पनि सिरदर्द हो। यदि तपाइँका बालबालिकालाई हेडचेस्ट र ज्वरो छ किनकि तपाईलाई चिन्ता छ भने, तपाईंको बालबालिकालाई सही निदानको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् र उपयुक्त दबाइहरूको अनुच्छेद।
एक भन्दा साधारण कारणहरु मध्ये एक बच्चा किन अक्सर एक टाउको दुखाइ हुन्छ विभिन्न संवेदनात्मक विकारहरु। यदि नियमित रूपमा रक्तचाप बढ्दै जान्छ भने, रक्त वाहिकाहरूको अस्थायी वा स्थायी घर्षण हुन सक्छ, त्यसमा, जुन मस्तिष्कमा रगतको रक्त प्रवाह हटाउँछ। हल्का प्रकारका रोगहरूको साथ, दिनको एक निश्चित शासन, एक स्वस्थ निद्रा र बाहिरी चक्र बच्चालाई मदत गर्न सक्छ।
विद्यालयको अवधिको दौडान, सिरदर्द प्रायः अत्यधिक तनाव र ओभर कार्यको कारणले गर्दा हुन्छ ।
यदि आमाको प्रश्नको बारेमा चिन्तित छ भने बालबालिकाले भने सिरदर्द र पोलिस छ, सम्भवतः कारण माइग्र्रेन हो। यो रोगले सीराटोनिनको अपर्याप्त उत्पादनको कारणले बढाएको छ र प्रायः वंशानुगत हुन्छ। बच्चा मा माइग्रेन एक अनुभवी न्यूरोलोजिस्ट को निगरानी को तहत जटिल उपचार को आवश्यकता हो।
टाउको दुखाइ बचपनमा असामान्य छैन। शायद सिरदर्द केहि दिन अघि बच्चाको पतन र चोटको परिणाम हो।
मस्तिष्क को अल्ट्रासाउंड निदान को लागि तत्काल एक चिकित्सा संस्थान मा ठेगाना लगान र concussion को बहिष्कार ।
अन्तमा, स्थिर सिरदर्द गम्भीर oncological रोगको संकेत हुन सक्छ । एक व्यापक परीक्षा आवश्यक छ।
बच्चाहरु मा एपिलिपी
रक्त प्रकारको बच्चा र आमाबाबु
बच्चाहरु मा एसीटोन संग आहार
किशोरहरु मध्ये सब्जी-वासुलर डस्टोनिया
बच्चाको हृदयमा शोर
बच्चाहरु को लागि निमोल
बच्चाहरु मा एक फरिन्गाइटिस को उपचार गर्न को लागी?
बच्चाहरूमा एचआईभी: लक्षणहरू
हाइपरमेक्टिव बच्चा - लक्षणहरू
साधारण ठंडबाट बच्चाहरु लाई बीट्रोस रस
बच्चामा पहेंलो स्टोट
बिरालोहरू किन उनीहरूको खुट्टामा सुत्छन्?
आलु र मासु कोसेरोल
आफ्नै हातले पुस्तक पसल
एक छाला क्लोक कसलाई लगाउने?
कजानको हाम्रो लेडीको प्रतिमा केले मद्दत गर्दछ?
डेमी लोभोतो र विल्मर वालेल्डरले एक रोमांटिक रिसेम्बर फेरि सुरु गरे
बैग DKNY - कसरी नकली देखि मूल DKNY बैग भेद गर्न?
एक बालबालिकाको कोठामा तस्विर वालपेपरहरू - उत्तम विषयवस्तु र डिजाइनका लागि डिजाइन
गर्भवती महिलाहरु को लागि रात शर्ट
हातका लागि एन्टिसेप्टिक
घर मा खट्टा क्रीम देखि मास्कर्पोन
महिलाको चलिरहेको जूता 2013
MDF बाट फ्रेम facades
अपार्टमेंट मा सौना
कुत्तों संग 40 सर्वश्रेष्ठ gifoc